avy amin'ny admin tamin'ny 20-05-08
metaly nitarina dia ravina vy izay voahidy avy eo nivelatra mba hamoronana diamondra na fomba hexagonal. Ny olona dia afaka mampiasa azy amin'ny fomba maro Ny famaritana toy ny etsy ambany: ny kofehy dia kofehy vy tsirairay, na ny sisin'ny vavahady diamondra. SWD, na Short Way of Design, no elanelana misy eo amin'ny p ...
Ny efijery Extruder dia misy karazana harato tariby voapaika
Ireo fitaovana dia vy tsotra, vy tsy misy fangarony ary fitaovana hafa. ny fonosana lamba vy tsy manara-penitra dia mahatohitra ny harafesina kokoa noho ny materail hafa. Stainless Screens Extruder dia ampiharina amin'ny extruder plastika,, granulator, ary lamba tsy misy tenona, masterbatch loko, sns harato: ...
famaritana ny vokatra Nickel tariby harato dia manondro ireo vokatra vita amin'ny vy tariby vita amin'ny akora nickel madio madio (tariby nikela, takelaka nikela, foil nikelikely, sns.) miaraka amin'ny atiny nikela 99,5% na avo kokoa. Araka ny fizotry ny famokarana, ny vokatra dia mizara ho ireto karazana ireto: A. Nickel w ...
1. Anaran'ny vokatra / anaram-bosotra: epoxy mifono tariby harato, epoxy coating harato, electrostatic coating harato, hydraulic sivana fiarovana harato, hydraulic sivana harato, hydraulic sivana vy harato, sivana fanohanana harato, epoxy varavarankely lamba harato. 2. Fampidirana amin'ny antsipiriany ny vokatra: epoxy indostrialy mifono ...